के हो साईबर सेक्स ??? – NawalpurTimes.com
के हो साईबर सेक्स ???
प्रकाशित : २०७६ मंसिर ५ गते ४:१३
डा . सुमनराज ताम्राकार
नेपाली समाजमा पहुँच र स्वतन्त्रताका कारणले तुलनात्मक रूपमा पुरुषमा साइबर सेक्सको लत बढी छ । अहिलेको पुस्तालाई कम्प्युटर, ग्याजेट, इन्टरनेट आदिका बारेमा जानकारी गराइरहनु पर्दैन । यस्तैमा यी सामग्रीहरूको माध्यमबाट गरिने यौनिक गतिविधिलाई साइबर सेक्सका रूपमा लिइन्छ । कुनै जमाना थियो। युवती वा महिलाको पिँडौला पनि यौनिक मानिन्थ्यो अर्थात् यतिसम्म हेर्न पनि मानिसहरू लालायित हुन्थे । त्यसैगरी पत्रपत्रिका, पुराना चलचित्रमा यौनजन्य सामग्रीको आफ्नै महत्व हुन्थ्यो । मानिसहरू लुकिछिपी पनि यी सामग्रीहरूबाट यौन आनन्द लिन पछि पर्दैनथे ।
समय निकै फेरिएको छ, हिजोआज साइबर अर्थात् इन्टरनेटमार्फत् जो–कोहीको यौनजन्य सामग्रीमा सहज पहुँच छ । बन्द समाज तथा परम्परागत मूल्य मान्यताका पक्षधर राष्ट्रहरूमा यस्ता सामग्रीमा कानुनी बन्देज लगाउनुका साथ गैरकानुनी मानी कडा सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । विडम्बना जहाँ बढी कडाइ गर्न खोजिएको छ, त्यहीँ नै यस्ता यौन सामग्रीको अधिक माग तथा गोप्य तवरले उपभोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
साइबर सेक्सलाई हस्त मैथुनसँग दाँज्न सकिन्छ । कहाँसम्म सामान्य, कहाँदेखि खराब लत छुट्याउनै सकिँदैन । हस्तमैथुनजस्तै साइबर सेक्स पनि यौन आनन्द प्राप्त गर्ने एउटा वैकल्पिक उपाय हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । साइबर सेक्सका माध्यमबाट व्यक्ति विशेष एक्लैले पर्याप्त यौन आनन्द लिन सक्छ । विश्वव्यापी रूपमै यौन हिंसा तथा बलात्कारका घटना वृद्धि हुनुमा साइबर सेक्स अर्थात् इन्टरनेटमा उपलब्ध यौन सामग्रीलाई दोष दिने जमातको कमी छैन ।
अन्य प्रयोजनका लागि इन्टरनेट प्रयोग गर्ने क्रममा यी यौन सामग्री उपलब्ध हुने साइट, पोर्टलहरूका बारेमा जानकारी छ भने रमाइलोका लागि यी सामग्री हेरेर यौन आनन्द लिइन्छ । जुन सुरुमा रमाइलो लाग्दा–लाग्दै पछि खराब लत बन्न बेर लाग्दैन । तसर्थ कानुनी रूपमै बन्देज गरिए पनि, परिवार तथा समाजले यसलाई राम्रो नमाने पनि साइबर सेक्सलाई नियन्त्रण त्यति सजिलो छैन ।
एक्लो वातावरण वा एकान्त ठाउँमा कम्प्युटर तथा ग्याजेटको उपलब्धता, अभिभावक तथा अग्रजहरूको निगरानीको कमी, आइटीका जानकार, पोर्न साइट वा पोर्टलको जानकार, यस्ता सामग्रीमा आफ्नै ईच्छा वा चाहना तथा साथीभाईहरूको सल्लाह नै साइबर सेक्सका आधारभूत तत्व हुन् ।
निश्चय पनि साइबर सेक्स सीमित परिधिसम्म एकातिर यौन मनोरञ्जनको राम्रो एवं स्वस्थ्य विकल्प हो भने यसै कारण आफ्नै यौन चाहनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसकिएको अवस्थामा यौन अपराध गर्न बेर लाग्दैन । साइबर सेक्सको खराब बानी लाग्यो भने विभिन्न शारीरिक समस्या देखा पर्नुका साथै व्यक्तिगत उत्पादनशीलता एवं कार्य क्षमतामा समेत व्यापक ह्रास आउँछ । साइबर सेक्सको लतले यौन जीवन नै अस्तव्यस्त हुनसक्छ । लामो समयसम्मको साइबर सेक्सको बानीले मानसिक समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ ।
साइबर सेक्सको निरन्तर उपयोगले एचआईभी तथा एड्स लगायतका यौनरोग लाग्नबाट जोगाए पनि अनिदो हुने, आँखा दुख्ने, ढाड दुख्ने, टाउको दुख्ने, अण्डाकोष दुख्ने, आलस्य हुने, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता लक्षण देखा पर्न सक्छन् ।
साइबर सेक्सको खराबीबाट जोगिन आवश्यक कार्यका लागि मात्र इन्टरनेट उपयोग गर्नुपर्छ । इन्टरनेटमा यौन सामग्री हेर्ने सोच आउनासाथ तथा वातावरण बन्नासाथ साथीभाई तथा परिवारजनको सामीप्यमा गई कुराकानी एवं ख्यालठट्टा गर्ने तथा आफूलाई मन पर्ने विषयमा समय व्यतीत गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । घर वा कार्यालयमा कम्प्युटर तथा इन्टरनेटलाई सबैको पहुँचमा राख्नुपर्छ । कसैले पटक–पटक अश्लील सामग्री हेर्छ/हेर्दैन अनुगमन गर्नुपर्छ । यस्ता सामग्री डाउनलोड गरेर राखिएको छ कि हार्ड डिस्क, रिसाइकल बिन आदिमा चेक गर्नुपर्छ ।
घरमा छोराछोरीले एक्लै इन्टरनेट चलाउन चाहने, कोही आउनासाथ अनुहार तथा मुड एक्कासि परिवर्तन गर्छन्, ख्याल गर्नुपर्छ । तिनीहरूका साथीसंगीसँग अप्रत्यक्ष जानकारी लिनुपर्छ । कसैले पनि आवश्यकताभन्दा बढी समय कम्प्युटरमा समय व्यतीत गर्न थाल्छ भने त्यसको वास्तविकता बुझ्नुपर्छ । कसैलाई लाग्छ साइबर सेक्सको खराब बानी छ भने आफ्नो मन मिलेको व्यक्तिसँग छलफल गर्नुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा मनोचिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ ।
बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा नवविवाहित जोडीसहित चार जनाको मृत्यु
बाढीले बगाएर भारतीय भूमिमा पुगेको गैंडा फिर्ता ल्याइयो
टिपरले अटोरिक्सालाई ठक्कर दिँदा बाबु-छोराको घटनास्थलमै मृत्यु